News Collection: केटीलाई मख्ख पार्न सुस्केरा काफी
केटीलाई मख्ख पार्न सुस्केरा काफी
पुरुष मित्रहरु कुनै नयाँ षोडसीलाई पट्याउने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ ? तपाइँले जति प्रयत्न गर्दापनि ती षोडसीले हेर्दै नहेरेकाले चिन्तित हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता छाड्नुहोस् । तपाइँको सानो प्रयासले मात्र पनि तपाइँले चाहेको व्यक्तिलाई मख्ख पार्न सक्नुहुन्छ ।
एक अध्ययनले महिलाहरु कुनै पुरुषले आफुलाई हेरेमा वा सुस्केरा हालेमा मात्र पनि मख्ख पर्ने गरेको तथ्य पत्ता लगाएको छ । बेलायतमा गरिएको अध्ययनले ८० प्रतिशत महिला कुनै नौलो पुरुषले आफुलाई हेरेको वा सुसेलेर जिस्काएको मन पराउँछन् ।
गुरुजीहरुले आफ्नो नजिकै पुगेर गाडीको हर्न बजाएको सुन्दा कतिपय महिलाहरु रिसाएको जस्तो गर्छन् । तर उनीहरुको त्यस्तो रिस बनाबटी हो । अपरिचित गाडि चालकले आफ्नो नजिकै आएर गाडिको हर्न बजाउँदा महिलाहरु मनमनै मख्ख पर्छन् र आफुलाई उसले खुबै भाउ दिएको ठान्छन् ।
तर महिलाहरुको यस्तो चरित्र पुरुषलाई थाहै हुँदैन । त्यसैले ३ चौथाइ पुरुषहरु अपरिचित केटीलाई ट्वाल्ट्वाल्टी हेर्न वा सुसेलेर बोलाउन हिम्मत गर्दैनन् । धेरै पट्टो गुरुजीहरु पनि केटीको झ्वाँक भेट्ने डरले उसको नजिकै पुगेर हर्न बजाइहाल्ने सासन गर्न सक्दैनन् । केटी आफुतर्फ आकषिर्त छे भन्ने कुराको भेउ नपाइकन केटाहरुले कुनै कदम चाल्नै सक्दैनन् ।
अध्ययन अनुसार ८० प्रतिशत महिलाहरु आफ्नो अविवाहित सहकर्मीले प्रसंसा गरोस् भन्ने चाहन्छन् । ९६ प्रतिशत केटीहरु आफ्नो पार्टनरको मुखबाट आफ्नो प्रसंसाको गीत गाइएको सुन्न चाहन्छन् ।